Ihe 7 ị ga - eme na Mallorca | Akụkọ Njem
Ihe 7 ị ga - eme na Mallorca
Susana Garcia | | Spain obodo, General, Palma de Mallorca, Ihe ị ga-ahụ
Mallorca bụ nke Balearic Islands, ọ bụkwa ya bụ otu n'ime ebe ndị a kacha chọọ na mba anyị. Ọ bụ ebe njem nleta na-apụta maka osimiri ya, mana enwere ọtụtụ ihe ma a bịa na ịnụ ụtọ ebe ezumike a, nke ahụ bụ na anyị nwere ike ịchọpụta ihe niile site n'ọgba ruo n'okporo ụzọ njem na ọtụtụ akụkọ ntolite. Ọ bụrụ na ị ga-aga n'àgwàetiti a, jiri ohere ahụ mee njem, n'ihi na ị ga-ahụ ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ iji kporie ndụ.
Anyị amaworị na anyị ga-aga n'akụkụ osimiri, mana tupu anyị gabaa, anyị ga-enwerịrị echiche ndị ọzọ maka tinye oge na Mallorca, n’ihi na anyị nwere ike imecha chọpụta na ihe ụfọdụ na-atọ anyị ụtọ amataghị anyị. Ọbụna n’ebe ndị anwụ na-acha, enwere akụkọ mgbe ochie na ọdịnala ị ga-enye ndị bịara leta ha.
1 Isi obodo Palma de Mallorca
2 Utezọ Patios nke Mallorca
3 Katidral Palma
4 Osimiri na coves nke Mallorca
5 Caves nke Drach
6 Ndị Castell de Bellver
7 Ugwu ugwu Tramuntana
Isi obodo Palma de Mallorca
Ọ bụrụ na anyị agaghị echefu ihe ọ bụla na nleta anyị na agwaetiti a, ọ bụ isi obodo ya, obodo nke, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, jikọtara akụkụ nke oge a na nke azụmahịa na nke ọzọ akụkọ ihe mere eme na okenye. Ke mbụk center bụ ebe anyị ga-ahụ ihe ndị kasị ọmarịcha nkuku, dị ka ndị Juu nkeji iri na ise, na Obodo ndị Juu nke obodo ochie. Mgbe ọgba aghara na mkpọtụ nke obodo ahụ gasịrị, anyị ga-ahụ onwe anyị n'okporo ụzọ dị warara ma dị jụụ. Ma ọ bụrụ na ike gwụ anyị nke ịgbachi nkịtị anyị nwere ike ịlaghachi azụ na mpaghara azụmahịa iji nwee obi ụtọ ịzụta ngwaahịa ndị a na-ahụkarị.
Utezọ Patios nke Mallorca
Obodo a nke Palma nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ya mere eji echekwa ụlọ ndị mara mma na ụdị ụlọ ha, nke enwere ime ụlọ n'èzí jakị, dị ka ọ dị n'ụlọ ochie Andalusia. Ha na-enye ohere ndị a dị mkpa, ha nwekwara akụkụ ndị mara mma nke na ha kere ụzọ nke patios nke Mallorca, iji chọpụta ụlọ a. Zọ a na-agafe na mpaghara ala obodo ahụ, ọ ghọwokwa ihe dị mkpa maka ndị akụkọ na ụlọ na-adọrọ mmasị.
Katidral a bụ nke kacha mara amara dika La Seu, na ọ bụ ụlọ nnọchi anya kachasị na Mallorca niile. O doro anya na ị nweelarị onyonyo nke katidral a n'uche gị n'ụdị ya dị na Catalan Gothic. O nwere ihe puru iche na ọ bụ ihe ncheta a na-agwụchabeghị, dị ka Sagrada Familia na Barcelona, ​​ọ nweela ọtụtụ mmezigharị ebe ọ bụ na owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX, nke Gaudí kacha mara amara. O nwekwara windo rose kachasị ukwuu na ụwa ndị Gothic, yabụ ịga na ime ya, iji chọpụta na gburugburu ebe ọkụ dị maka ụzọ si Romanesque gaa Gothic dị mkpa.
Osimiri na coves nke Mallorca
Agwaetiti a abụghị naanị ebe ọ ma ama maka osimiri ndị ama ama mmiri na-ahụkarị kristal doro anya na ájá doro anya Styledị Mediterranean, kamakwa maka inwe ọtụtụ coves gbara gburugburu site na okike nke ga-efu. Offọdụ n'ime ndị ahụ anyị agaghị agali bụ Cala Varqués dị na Manacor, Cala Mondragó na Santanyí, Playa de Formentor na Pollença ma ọ bụ Es Trenc na Campos. Ha niile nwere ihe jikọrọ mmiri ahụ na-ekpo ọkụ ma na-agbanwe agbanwe na gburugburu okike mara mma nke ga-efu n'oge ezumike. Anyị ga-achọ ịlaghachi ebe ahụ ugboro ugboro.
Agbanyeghị na Drach Caves bụ ndị ama ama na agwaetiti a, o nwere ọtụtụ ndị ọzọ na chasms, ebe dị mma maka ndị hụrụ spelunking. Ruo oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịhapụ osimiri na okpomọkụ ahụ n'azụ ịbanye gburugburu ebe dị jụụ nke ọgba ndị a dị n'okpuru ala. Ndị nke Drach lelee Lake Martel, e weere dị ka otu n'ime ọdọ mmiri ndị kasị ibu n'ụwa. Ọbịbịa ahụ dị ihe dị ka otu elekere, ma ị ga-agarịrị ihe karịrị otu kilomita. Tụkwasị na nke a, ha na-atọ anyị ụtọ site na egwu egwu oge gboo na njem ụgbọ mmiri dị egwu na ọdọ mmiri.
Ndị Castell de Bellver
Lọ a nwekwara Candị gothic nke Majorcan, ma nwee nnukwu ihe dị mkpa nke inwe atụmatụ okirikiri, ihe anyị na-agaghị ahụkarị na arụ ndị a. Ọ dị ihe dị ka kilomita atọ site na obodo Palma, ya mere a ga-eleta ha abụọ n'otu ụbọchị. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX site n'usoro nke Jaime II nke Mallorca. Nwere ike ịga njem nlegharị anya n'ime nke ga-ewe ọkara elekere, nke anyị na-ahụkwa ala a na-agba agba, City Museum Museum, ụlọ ocheeze ma ọ bụ Chapel nke San Marcos.
Ugwu ugwu Tramuntana
N'agwaetiti a ọ bụghị naanị osimiri, kamakwa ebe maka ndị chọrọ ịla n'iyi n'etiti okike na ikuku nke ugwu. Na Sierra de Tramuntana anyị na-ahụ Obodo Valldemossa, nke ewuru n’elu okwute na kilomita iri na asaa site n’isi obodo ahụ. N'oge na-adịghị anya, anyị gafere n'udo nke ugwu ahụ, ọ bụkwa ebe nwere ọmarịcha ikuku maka egwuregwu dị ka ịgagharị ma ọ bụ ịgagharị na ugwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe 7 ị ga - eme na Mallorca
Onye ndu Hiroshima, ubochi ato m n’obodo bombu atom
Osimiri a na-agaghị echefu echefu na Hawaii